खुसी बाँड्न : मेरो खुसी – Merokhushi
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार	/ 28th September 2021, Tuesday
खुसी बाँड्न : मेरो खुसी
खुसी ब्यक्तिमै निहीत हुुन्छ । हामी त्यही खुसी जागृत गर्न आएका छौं । एकको खुसी अर्कोलाई बाँड्न चाहन्छौं । यसमा तपाईको सुझाव, सल्लाह, साथ, सहयोग र सहकार्य हुनसक्यो भने पक्कै हामी कोरोना भाइरसका कारण दुःखी मनमा पनि खुुुुसीको मल्हम लगाउन सक्नेछौं ।
मेरो खुसी । ७ चैत्र, २०७६ शुक्रबार १९:३४ मा प्रकाशित
‘मुस्कानले हामीलाई आनन्द महसुस गराउँछ । जब आनन्द महसुस हुन्छ । निसन्देह खुसी प्र्राप्त हुन्छ’, मनोविद् जोन इटलको यो भनाइ जीवन अभ्यासको सार हो । खुसी मानसिक कुरा हो । जसलाई शारीरिक अवस्थाले पनि प्रभाव पार्छ । शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त भयो भने खुसी अनुभव हुन्छ । जीवनप्रतिको धारणा र जिउने तरिका फरक फरक हुन्छ । त्यसैले खुसी हुने, खुसी बुझ्ने र अनुभूति सबैमा समान हुँदैन । जीवन पद्दती र अभ्यासका आधारमा खुसी प्राप्त गर्ने तरिका सिकाउने र खुसीको ज्ञान बाँड्नु नै मेरो खुसी डटकम www.merokhusi.com को मुख्य उद्देश्य हुनेछ । हाम्रो अनलाइनमा थोरै स्तम्भ छन् । सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन र उत्प्रेरणा प्रदान गर्न सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । ब्यक्ति, समाज र संघसंस्थाका असल अभ्यास, विकास र समृद्धिका कथा, ज्ञान, विज्ञान तथा अध्यात्मका अनुशरणीय र अनुकरणीय कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
न्युज अपडेट स्तम्भमार्फत हामी ताजा समाचार पस्कनेछौं । छिटो समाचार दिने नाममा अपुरो, अपुष्ट, एकतर्फी, र पूर्वाग्रही समाचारमा सधैं सर्तक हुनेछौं । सत्यतथ्य र सन्तुलित समाचारमा कहिल्यै विचलित हुनेछै्रनौं । खोज, अनुसन्धान र सर्वेक्षणमा आधारित समाचारको अभ्यास गर्नेछौं । हामी कहिले सानो–सानो कुरामै धेरै खुसी हुन्छौं । कहिले अनायासै दुःखी भइदिन्छौं । सुख दुःख त एक अर्काका परिपुरक नै हुन् । दुःखमा नआत्तिने र सुखमा नमात्तिने हो भने जीवन जिउन गाह्रो हुन्न । जीवन जिउने कला जीवन विज्ञान स्तम्भले सिकाउनेछ । ब्यक्तिको तन र मनको स्वास्थताका योगध्यान खण्ड छ । धेरै रोग खानपानकै कारण लाग्छन् । कुन समयमा कस्तो खानेकुरा खाने र नखाने भन्ने विषयकोे जानकारी ‘स्वास्थ्य र खानपान’ स्तम्भमार्फत दिनेछौं ।
समृद्धि स्टोरी विकास र समृद्धिको विषयमा केन्द्रीत हुनेछ । यो स्तम्भमार्फत हामी ब्यक्ति, समूह, समुदाय, संस्था र क्षेत्रको सफलताका कथा पस्कनेछौं । असल अभ्यास उजागर गर्नेछौं । जुन प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ । संवाद स्तम्भले हाम्रा समाचार, समृद्धि स्टोरी वा अन्य स्तम्भका सामग्रीलाई परिपूरकको रुपमा काम गर्नेछ । भनिन्छ, कि पढेर जानिन्छ, कि परेर ? विषय विज्ञको मानक हामी प्राज्ञिक ज्ञानलाई मात्र मान्नेछैनौं । अनुभवीलाई हामी विज्ञकै दर्जामै स्थान दिनेछौं ।
मेरो खुसी स्तम्भ लेख खण्ड हो । लेख खुसीसँग मात्र सम्बन्धित हुनेछ । व्यक्ति कसरी खुसी भइरहेको छ ? खुुसीको स्रोत के हुँदो रहेछ ? कहिले र किन खुसी हुन्छ ? भन्ने कुरा लेखकका अभिव्यक्तिका माध्यमबाट साँटासाँट गर्नेछौं । यो खुुसीको संगालो हो । श्रव्यदृश्य माध्यमबाट विचार, धारणा वा ज्ञान अभिव्यक्त गर्न हामीसँग मल्टिमिडिया छ ।
हामी समस्या उठान मात्र गर्नेछैनौं । समाधानका उपाय पनि बताउनेछौं । फाइदा र बेफाइदा, प्रयोग विधि र अभ्यास अनि अनुभव सबै कुराको प्याकेज पस्कनेछौं । हामी समाजलाई सूचना मात्र दिने छैनौं । त्यो सूचना व्यक्ति, परिवार, समाज, स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकार, सम्पूर्ण मानव जाति र विश्व ब्रह्माण्डका लागि सकारात्मक परिवर्तन र उर्जाको श्रोत वा मार्गदर्शक बनाउन चाहन्छौं । ‘ब्याड न्युज इज गुड न्युज’ नै ‘बेस्ट सेलर न्युज’ हो मान्ने व्यवसायिक मिडियाको विश्वव्यापी मान्यताभन्दा माथि उठेर हामी सकारात्मक सन्देश समाजका लागि बढी उपयोगी हुन्छ भन्ने स्थापित गर्न चाहन्छौ । जुन पाठक र दर्शकका लागि अभिप्रेरणा बनोस् ।
हामी अरु अनलाइन भन्दा भिन्न हुनेछौं । किनकी हामीले अरु मिडियालाई प्रतिष्पर्र्धी ठान्नेछैनौं । हरेक विषयवस्तु एकपछि अर्को गहन, पठनीय र अनुकरणीय बनाउनु नै हाम्रो मुख्य प्रतिष्पर्धा र चुनौती हुनेछ ।
खुसी ब्यक्तिमै निहीत हुुन्छ । हामी त्यही खुसी जागृत गर्र्न आएका छौं । एकको खुसी अर्कोलाई बाँड्न चाहन्छौं । यसमा तपाईको सुझाव, सल्लाह, साथ, सहयोग र सहकार्य हुनसक्यो भने पक्कै हामी कोरोना भाइरसका कारण दुःखी मनमा पनि खुुुुसीको मल्हम लगाउन सक्नेछौं ।
गुलरियामा बालविवाह घटेको छ : उप-प्रमुख गिरी
तस्करीको सामान बरामद हुँदा ‘तस्कर’ किन पक्राउ पर्दैनन् ?
ट्रिपरले सडक बाह्रैमास हिलाम्मे (फोटो फिचरसहित)
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र चिराकीलाई साइकल उपहार
चितुवाले मा-यो एउटै खोरका २३ वटा बाख्रा
कण्डम जस्तै सेनेटरी प्याड पनि निःशुल्क गर्न माग
१० लाखको भन्सार छलेका कपडा बरामद
मधेश मिडिया मिशन नेपाल बाँकेको अध्यक्षमा त्रिपाठी
आमाको निधनपछि बिमितको घरमैै पुगेर बिमा रकम भुक्तानी